Ball Cawaaqibkaa Daya Nabsiga Looms Caad Helo'e. Qore:- Abdi-Shotaly
(Hadhwanaagnews) Thursday, August 09, 2018 08:23:17
Wixii wakhtigaa joogay ee noolina way og-yihiin, wanna ay la socdaan, kana dheregsan yihiin siddii lagu soo xero geliyey
Nine baa laga hayaa "
Ayaan daranaa dhul-kaygu, aqoon Daranaa dhashiisu, ilaahay haduu was siiyo, ilawsho dhawaa saboolku". Waa murti wax badan oo gurac u socdda loo daliilsan Karo. Aan ku soo dhawaado'e,
Somaliland wixii ka dhacay iyo xaq daraddii ay ka dagaalantay, ee naf iyo maalba lagu waayey cidna kama qarsoona. Wixii wakhtigaa joogay ee noolina way og-yihiin, wanna ay la socdaan, kana dheregsan yihiin siddii lagu soo xero geliyey, ee lagaga xoreeyey maamulkii umula dooxa ahaa, kaas oo aynu si ahaan uga mid ahaan jirnay, hadana il-gaara la inagu eegi jirey, cadaalad daraddii la inagu sameeyey, iyadda oo aan loo sinayn.
Murti baa ahayd " Markaan is idhaa wax taransaba, saw tii alle meel ma sii taal ". Halkii aan is lahaa imika baad suuliseen kana maydhateen wixii idin soo maray, baan mar kale meel ka xun sii galay". Wuxu yidhi Alaa yarxamo'e Abwaan Qaasim " Waataa ilmaha loogu xidhay, geed adaahiyahe" ujeedadu wax weeye, haday ciin sii daaqday.
Nin aan aabihii maali jirin looma aamino'e, waa taa uu Askari aan macne u garanaynini uu cunaha hayo. Ee joog iyo jiif midnaba diiday. Ee uu qulaan-qulshaha ka gawracay.
Akhristaw saw maaha markaas
" Hadaba dunidda duul baa camira, caydh ahaan jiraye, gob la ciilay iyo inan gummeed calan-walayna, carigay ku wadda saabsan tahay, caawa sidan ahaye, ee bal Cawaaqibkaa daya Nabsiga looma caad helo'e".
Hadda waxa aynu ka mid noqonay, ama nahay-ba maamul-goboleed ka trisan Somaliya, mana dafiri karno, waayo waa cadaan oo wax inaga dedan baan jirin-ba. Weliba ku darso akhristaw, oo wixii aan markii hore ka dagaalanay, meel ka xun baynu hadda joognaa, waayo awel weynu wadda soconay, imikase jeegaanta mooyee intii kalaa dulman, sidaas awgeed waxba meesha ma yaalaan ee ummadu ha tashato.